Omena sehatra ny asa tanana Malagasy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Omena sehatra ny asa tanana Malagasy
Richard Rakoto il y a 2 mois
Hotanterahana ny 28, 29, 30 jolay ao amin’ny Hotel Pave Antaninarenina ny Salon de l’Artisanat.
Mikarakara hetsika varotra fampirantiana ny Ajeem Madagasiakra. Araka izany ny Ajeem Madagasikara dia faly manasa antsika ho tonga maro hitsidika sy hanjifa ny zavatra vita Malagasy ao amin’ny Le Pavé Antaninarenina ny 28-29-30 jolay 2021 isaky ny amin’ny 9 ora maraina hatramin'ny 5 ora hariva.
Hetsika entina hanomezan-danja ireo mpanao asa-tanana malagasy sy ny asa-tanana malagasy. Entina miakatra tanana ny asa-tanana Malagasy fa tsy avela ho eny amin’ny sampanan’Ambohitrimanjaka na koa eny amin’ny Pochard Soarano no ahitana ity sehatra iray ity. Entina ampahafantarana ireo vahiny sy ny Malagasy ihany koa no hanaovana izao hetsika izao. Maro ireo mpisehatra amin’ity sehatra ity ary manao izany ho fivelomana saingy miasa mangina tsy misy mpahalala any rehetra any. Tarihina izy ireo mba hiditra amin’ny fanaraham-penitra. Hametraka izany asa-tanana izany ho zava-dehibe satria sady kolontsaina izy ireny no fivelomana ihany koa, hamantarana an’i Madagasikara mazava ho azy. Mba hahatsapan’ireo mpisehatra ny maha zava-dehibe io asa-tanana io fa tsy hijanona ho fahazarana fotsiny ihany ka manjary tsy mivoatra sy tsy mampiezaka.
Mila fiofanana tahaka ny zavatra rehetra ny asa-tanana. Ny eto amintsika dia saika talenta sy fampianaran-tena no nahatonga ny olona hanao azy ho fivelomana. Misy amin’ireo fikambanana iraisam-pirenena toy ny Onudi no miara miasa amin’ny fanjakana Malagasy amin’ny fanofanana ireo mpisehatra sy izay liana amin’io asa-tanana io.
Tratran’ny fahasahiranana tahaka ny rehetra ny mpanao asa-tanana taorian’ny fipariahan’ny Covid-19. Ireo teratany vahiny no tena manjifa ny asa-tanana Malagasy saingy noho ny sisintany mbola mihidy dia zara raha misy mpanjifa. Manahirana ihany koa ny fitadiavana ny akora fototra. Nandritra ny fikatonan’ny lalana dia tena sahirana tokoa, ary tena nananosarotra mihitsy ny fitadiavana ireo akora fototra izay any amin’ny faritra no betsaka ahitana azy.
Maro ireo mpanao asa-tanana eto amintsika nefa tsy fantatra hoe firy marina. Mahavelona ve ? Ny tsirairay no mahita ny valiny saingy raha ny fampandrosoana ny Firenena no jerena dia mila omena lanja seha-pamokarana rehetra mba ho fiharian-karena, satria sady mamoron’asa no mandoa hetra. Anjaran’ny mpitondra no mieritreritra izay tokony hatao fa ny mpanao asa-tanana aloha dia efa eo, ny tohiny sisa andrasana.